नग्नता त सुन्नै सक्दिनन् रे बिनिता ! ~ The Nepal Romania
नग्नता त सुन्नै सक्दिनन् रे बिनिता !
10:45 AM बिबिध No comments
कुनै समय एक चलचित्रका लागि नै टपलेस फोटो खिचाएकी नायिका बिनिता बराल अहिले नग्नता, ग्लायमर भन्ने बित्तिकै दिक्क मान्छिन् । कारण ‘चपली हाईट’मा टपलेस फोटो खिचाएपछि एक्कासी विवाद र चर्चामा तानिएकी यि नायिकालाई यो घटनाले नै नग्नता भन्ने शब्दबाट दिक्क लगाएको रहेछ । एक भेटमा बिनिता भन्दै थिईन् -’मलाई नग्नता होईन, अब यसलाई नै मिलाएर सौन्दर्य भन्ने शब्द सुन्न मनलाग्छ । त्यो घटनाले धेरै कुरा सिकाएको छ । हुन त संसारमा बिक्ने नै सेक्स हो । तर
पनि अहिले म यो सुन्न समेत नसक्ने भएको छु । यो शब्द सुन्ने बित्तिकै मलाई भमिट आउँछ ।’
नायिका बराल अब आफुले यस्तो सिनेमा नगर्ने समेत दावी गर्छिन् । चलचित्र ‘चपली हाईट’को स्क्यान्डलका कारण परिवारबाट समेत धेरै नै आलोचना भोगेकी उनी अब यो सिनेमामा दिएको जस्तो भुमिका नगर्ने बताउछिन् । नग्नतादेखि नै दिक्क मानेकी यि नायिका पत्रकारले समेत यसबारेमा प्रश्न नसोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने मुडमा देखिएकी थिईन् ।
नायिका बिनिता भन्छिन् -’अब म यस्तो भुमिका गर्दिन । मैले गर्ने अर्को सिनेमामा मेरो भूमिका बेग्लै हुन्छ ।’ जे होस्, पहिलो सिनेमाबाट नै नायिका बिनिता बरालले राम्रै पाठ सिकेकी रहिछन् । हेरौ, उनले खेल्ने आगामी सिनेमामा उनको भूमिका कस्तो हुने हो । तर बिनिताजी समाज र देशको परिवेश हेरेर दृश्य दिएमा यसरी भमिट नै आउने गरी दिक्क मान्नु नै पर्दैन नि ।
Nepali Movie kohi mero full
उध्रेको चोलीको चर्चा मलेसियामा पनि उत्तिकै (फोटो फ...
बर्लिनमा 'हाइवे'को प्रतिस्पर्धा २६ फिल्मसँग
आइएम सरी : ट्रेलर रिलिज
अभिनेत्री सुशिला रायमाझीको निधन
यो कस्तो प्रिमियर ?
शुक्रबार सिनेमा हलमा
मेरा सबै सिनेमा करिअरसँग जोडिएका हुन्छन
बर्लिन फिल्म महोत्सवमा पहिलो पटक नेपाली फिल्म
डाइनिङ टेवलको सेक्स प्रियंकालाई मज्जा
रेखा र झरना पछि खै त नायिका ?
पोष्टर मात्रै कि सिनेमा पनि चोरी हो ?
शक्तिशाली बन्दै रेखा
दुई जोडीलाई विवाह गराउने सिनेमा
नायक पनि, गायक पनि
ब्रेकअप एक बर्ष अगाडी नै भएको हो : झरना बज्राचार्य...
केकीको कमाइ ३ लाख
किन चिढिइन् रेखा, हमालसँग
‘सुमिना र अनुष्काले छोड्नुको अर्थ छैन’
‘एकअर्काको फोन खोतल्दैनौं'
‘जलजला’ हेर्न प्रचण्ड कुमारी हल पुगे
महङ्गा सिनेमाले थिचिए आर्यन
सम्वन्ध विच्छेदको खबरपछि रेखा खुसी ?
'लुट' वयष्कलाई मात्र
'छोटो लुगाभन्दा उध्रेको चोली नै ग्ल्यामर'